Inona no atao hoe toerana fanaraha-maso? Ary Tsara kokoa ve ny anatiny sa ivelany? - An-Tsaina
Inona no atao hoe toerana fanaraha-maso? Ary Tsara kokoa ve ny anatiny sa ivelany?
Hatraiza ny fanaraha-maso anananao amin'ny fiainanao, ary ohatrinona ny fifehezan'ny hery hafa anao?
Fanontaniana manitikitika tsy misy valiny voafaritra izany. Na dia misy aza ny teoria momba ny finiavantsika tena sy ny safidintsika malalaka (na ny tsy fisian'izany), ny adihevitra dia tsy eo akaikin'izany.
Ny tena manan-danja kokoa amin'ny sahan'ity lahatsoratra ity dia ny fomba fahitanao ny fahaizanao mifehy ny vokatry ny fiainanao. Raha ny fantatra dia misy fiatraikany amin'ny fomba fisainantsika sy ny fitondrantenantsika mihoatra ny noeritreretintsika io fomba fijerin'ny tsirairay io.
Ny teny ampiasain'ny psikology hamaritana an'io fomba fijery io dia ny anao toerana fanaraha-maso . Ny teny hoe 'locus' dia midika toerana na toerana, ary raha ny amin'ny fifehezana dia azo faritana ho anatiny na ivelany.
Ny toerana fanaraha-maso eo an-toerana dia midika hoe apetranao mafy eo am-pelatananao ny fahefana - sy ny enta-mavesatra amin'ny andraikitrao. Ny toerana fanaraha-maso ivelany dia ny mifanohitra amin'izay, miaraka amin'ny fahefana sy andraikitra an'ny an'ny hery ivelany.
Ireto misy ohatra roa hanampy anao hahatakatra:
Ohatra 1:Brian dia nahazo fampiroboroboana tany am-piasana.
Raha manana toerana fanaraha-maso anatiny i Brian, dia azo inoana fa hanome izany vokatra izany amin'ny fombam-pahaizana miasa mafy, ny fahombiazany am-baravarana ary ny toetrany mahasarika.
Raha manana toerana fanaraha-maso ivelany i Brian, dia azo inoana fa hanome azy ity vokatra ity amin'ny vintana, amin'ny fotoana mety ary amin'ny tsy fisian'ny kandidà hafa.
Ohatra 2:Tsy nahomby tamin'ny fitsapana nitondra azy i Susana.
Raha manana toerana fanaraha-maso anatiny i Susan dia azo inoana fa ny tsy fahaizany fahaiza-manao sy ny hozatra ary ny fotoana voafidiny amin'ny fitsapana no anton'izany.
Raha manana toerana fanaraha-maso ivelany i Susan dia azo inoana fa ny toetr'andro ratsy no hitrangan'izany, mpamily tsy mitandrina hafa eny an-dalana amin'izany fotoana izany, ary manana andro ratsy ny mpandinika.
Ka iza no tsara kokoa?
Tsy misy valiny amin'ity fanontaniana ity. Voalohany, zava-dehibe ny manamarika fa ny toerana misy anao amin'ny fifehezana dia tsy na anaty na ivelany dia mianjera miaraka amina spektrum eo amin'izy roa.
Mety hiankina bebe kokoa amin'ny toerana anatiny ianao, saingy tsy manakana anao tsy hino zavatra sasany tsy voafehinao izany. Toy izany koa ianao, mety hipetraka lavitra mankany amin'ny faran'ny refy ivelany, saingy azonao atao ihany ny mahatakatra hoe inona ny andraikitrao.
Inona koa, samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy…
Olona misy an anaty ny locus of control dia azo atosika sy voatosika hiasa mafy sy hahatratra fahombiazana satria mino izy ireo fa manan-kery hanova fiovana tsara eo amin'ny fiainany.
Matetika izy ireo dia mavitrika amin'ny sehatry ny fiainana rehetra, ao anatin'izany ny fifandraisana, izay mety, ohatra, izy ireo no manao ny fihetsika voalohany amin'ny fampihavanana izay nisehoan'ny tsy fifanarahana.
Etsy ankilany, mety ho maika hanome tsiny ny tenany ihany koa ilay olona rehefa tsy mandeha ny drafitra. Mety hanakiana tena loatra izy ireo ary hikapoka ny tenany noho ny tsy fahombiazany. Inona koa, raha tsy misy ny fotoana ahafahana mandroso na manatratra ny tenany, dia mety ho diso fanantenana izy ireo ary mino fa mandany ny fahafaha-manaony.
Olona misy an ivelany ny locus of control dia mety hiatrika tsaratsara kokoa amin'ny tsy fahombiazana (farafaharatsiny ao anatin'ny fotoana fohy) satria azon'izy ireo ampitaina amin'ny anton-javatra hafa sy hampihemotra ny tsikera amin'ny zava-bitany manokana. Ary rehefa misy zava-dratsy mitranga, dia mety ho haingana kokoa hanaiky azy izy ireo ary handroso satria tsy mino izy ireo fa mety nisy fiantraikany tamin'ny vokany: nitranga izany ny izy ireo, tsia SATRIA amin'izy ireo.
Rehefa miasa ao amin'ny ekipa iray izy ireo dia mety hanome dera kokoa noho ny asa vita tsara satria mankasitraka ny fitaoman'ireo mpilalao ivelany mihoatra ny ataony izy ireo.
Etsy ankilany, ny fironany manome tsiny ny antony ivelany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fifandraisan'izy ireo (miasa, tantaram-pitiavana, na hafa) satria hametraka ny vesatry ny andraikitra amin'ny olon-kafa afa-tsy izy ireo ihany. Ny olana dia ao an-tsain'izy ireo no mahatonga ny hafa olona, ​​ary tsy dia toy ny manitatra sampana oliva izy ireo satria mahatsapa fa izy ireo no nampijaliana.
Ireo izay mirona kokoa mankany amin'ny farany ivelany dia azo inoana koa fa hilavo lefona haingana kokoa amin'ny asa iray ary hahatsapa ho tsy afaka miarina amin'ny toe-javatra tsy mendrika izay mahazo azy ireo. Mahatsiaro ho voaozona ho amin'ny lahatra kokoa izy ireo noho ny manatsara ny toe-javatra misy azy ireo.
Tsy misy fomba mety na diso, fa ny fikarohana amin'ity sehatra ity hatreto dia manondro fa ireo izay manana toerana fanaraha-maso anatiny kokoa dia tsy mora ketraka, miatrika adin-tsaina tsara kokoa, ary afa-po kokoa amin'ny asany.
Mahita ny fifandanjanao
Amin'ny lafiny sasany, ny locus of control anao dia zavatra azonao ahitsy arakaraka ny toe-javatra. Mila fiezahana mafy ny hanjaka amin'ny fihetsikao voajanahary, fa raha afaka mieritreritra ny toe-javatra misy anao ianao dia afaka mahita azy ireo mazava kokoa ary mamantatra hoe inona ny fitaomana, raha misy ianao eFA nanana na afaka nanana nanana.
Ny famantarana sy fanekena ny antony mahatonga ny hetsika no tanjona voalohany amin'ny fandanjana ny toerana misy anao. Aza mihaino ny eritreritrao tany am-boalohany fa miato vetivety ary misaintsaina ny tena zava-misy. Hita taratra amin'ny sainao ve ny andian-tantara? Sa manodikodina zavatra hifanaraka amin'ny fitantarana izay lazainao matetika amin'ny tenanao?
Ity dingana ity dia mety hahatsapa ho tsy voajanahary. Manontany tena ianao - ary ny tsinainao - amin'ny alàlan'ny fanamby ny fehin-kevitra azonao. Tokony hesorinao ny sivana fahitana ary atsipazo ny masonao amin'ilay tena sary eo alohanao. Mila fanazaran-tena sy fikirizana vao afaka manao an'izany amin'ny fomba mahomby.
Ny zavatra iray afaka manampy dia ny manehoa fangoraham-po. Zava-dehibe indrindra izany ho an'ireo izay manana locus fifehezana voajanahary ho an'ireo izay manome tsiny ny tenany amin'ny zavatra rehetra sy ny zavatra tsy mety rehetra.
Mahagaga fa ny olona toy izany dia tsy dia maika loatra manameloka ny hafa noho ny heverina fa tsy fahombiazana. Ny fomba itondrany ny tenany dia tsy manondro ny fomba itondrany ny hafa, ary afaka ny ho tsara fanahy sy be fiahiana ary mangoraka toa ny olon-kafa izy ireo.
Ny hafetsena ho an'ny olona toy izany dia ny maka sary an-tsaina hoe miresaka amin'ny tenany ho olon-kafa izy ireo ary mihetsika sy miteny mifanaraka amin'izany. Raha tokony hitsikera be loatra ary hamela eritreritra manimba maka toerana, maneke ny zavatra ilainao sy ny fahatakaranao izay zavatra mety ho noheverinao fa lesoka na lesoka.
Tsy midika akory izany fa tsy afaka mianatra avy amin'ny toe-javatra izay tena teo am-pelatananao ny fifehezana. Indraindray dia hianjera aminao ny tsy fahombiazana, fa tsy hitanao ho maharatsy izany dia lazao amin'ny tenanao fa, 'Eny, diso aho, fa hianarako avy amin'izany ary hatanjaka kokoa noho izany.'
Amin'ny toe-javatra misy ny lokaloka fanaraha-maso ivelany dia miteraka eritreritra sy fitondran-tena resy, zavatra iray azonao andramana ny tadiavo ny zavatra madinidinika AZONAO atao hanova ny toe-javatra misy anao.
Averina indray, ity dia tokony ho dingana mahatsiaro tena izay manohitra ny fisainanao mianatra. Tokony hangina ny eritreritra fa mpandeha tsy mahavita inona ianao, ary ampahatsiahivo ny tenanao hoe hatraiza ny fifehezana anananao amin'ny fiainanao manokana. Ataonao izany amin'ny fanamafisana ny fananganana, manomboka amin'ny zavatra bitika kely ka saika tsy misy dikany.
Angamba ianao no manao ny fandriana, manondraka ireo zavamaniry, mamaky fanamafisana tsara , ataovy kafe ny kaopy, na alao ny boaty mailakao mbola tsy novakiana. Tsy maninona na dia toa tsy misy dikany firy aza izy io, ny zavatra ataonao fotsiny no zava-dehibe. Avy eo manaova zavatra hafa, avy eo hafa iray, ary tohizo ireo zavatra kely ireo mandra-pahitanao fa tena nahavita be tokoa ianao. Mampahatsiahy anao izany Aza mifehy ny ampahany amin'ny fiainanao, raha misafidy ny hampihatra izany ianao.
Tetika iray lehibe handanjalanjana ny toerana fanaraha-maso ivelany izay mifanila amin'ny tsy fahasalamana dia ny mazotoa fa tsy matoantenin'ny atao . Manaova zavatra betsaka araka izay tratranao ka mahatafiditra anao misafidy ho anao - na dia manomboka kely aza ianao ary manamboatra ireo zavatra misy vokany bebe kokoa.
inona no hatao rehefa tsy hiova izy
Fiheverana lehibe iray hafa tokony hatao dia ny tantarao amin'ny tenanao rehefa misy zavatra tsara mitranga eo amin'ny fiainanao. Na dia mifantoka tsara amin'ny zava-misy aza ny masonao dia tokony derao ny tenanao noho ny fitaomana nanananao tamin'ny vokatra tsara rehetra. Eny, mety misy singa iray idiran'ny vintana, saingy zavatra vitsivitsy ihany no miakatra amin'ny vintana tsara na ratsy.
Mifanohitra amin'izay, raha kely kokoa noho ny faniriana ny valiny, dia ataovy marim-pototra ny andraikitrao. Aza miditra amin'ny lalao manome tsiny, mitadiava tranga mety ho nahadiso anao, fa aza mieritreritra ny andraikitra any an-kafa.
Mety hampahory ny manaiky ny tsy fahalavorarianao - indrindra amin'ny olon-kafa - fa ny fanaovana izany dia mety hanamafy orina ny fifandraisana sy hanatsara ny toe-javatra misy anao. Mahazoa hery amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanananao andraikitra.
Toetra 15 an'ny olona matotra ara-pihetseham-po
Karazan’olona ‘mitsara’ na ‘mahatsikaritra’ ve ianao?
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fanaraha-maso mahatsiravina eo amin'ny fiainanao
Ny faminaniana manatanteraka tena: Ilay 'tsiambaratelo' tena ao ambadiky ny lalànan'ny fahasarotana?
Ny mari-pahaizana momba ny fifehezana
Lafiny iray lehibe hafa amin'ny fifehezana anao dia ny fahitanao zavatra maharitra (na maharitra) na azo ovaina. Na, mba ho marimarina kokoa: marin-toerana na tsy marin-toerana.
Azonao atao, ohatra, ny mandinika ny halavan'ny olon-dehibe efa antitra mba ho marin-toerana. Ny fandrefesana ny andilanao kosa dia zavatra mety miova ary heverina ho tsy milamina.
Tsy milamina ny ezaka ataonao amin'ny zavatra iray. Milamina ny fahasahiranan'ny asa sasany (ny marathon any New York dia mitovy 26 kilaometatra isan-taona, na dia mety hahatonga azy tsy hilamina aza ny toetr'andro).
Ny zonao amin'ny maha olom-pirenen'ny firenenao dia azo heverina ho marin-toerana na tsy marin-toerana arakaraka ny toerana onenanao.
Tsy milamina ny toetr'andro, fa ny fiovan'ny fizaran-taona dia miankina amin'ny toerana onenanao, dingana maharitra (na dia misy fiatraikany amin'izany aza ny fiovan'ny toetrandro).
Ny fahamendrehan'ny zavatra iray dia mety hisy fiantraikany eo aminao raha mino ianao fa ao anatiny na ivelan'ny toerana misy anao izany. Na dia marin-toerana / tsy milamina aza ny zavatra sasany, dia mety hitranga koa raha ny fahitanao zavatra iray no tena manadanja. Mety hanapa-kevitra ianao fa misy lafin-javatra hafa na hafa ka tsy zavatra voafehinao. Ny olona iray hafa dia mety hahita ny toe-javatra mitovy amin'ny azy ary hino fa afaka manova zavatra izy ireo.
Ohatra, mety hitanao ny fisamborana sery amin'ny ririnina ho tsy azo ihodivirana. Mitranga izany isan-taona ary vokatra azo antoka satria tratran'izany ianao amin'ny fitateram-bahoaka ary raikitra ny hery fiarovanao. Mety misy mahita ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'izy ireo ho tsy milamina, ary amin'izany zavatra iray azon'izy ireo atao amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo ara-pahasalamana. Mety ho hitan'izy ireo koa ny fivezivezeny hiasa ho toy ny zavatra azon'izy ireo ovaina amin'ny bisikileta, mitondra fiara, na mandeha an-tongotra hafa.
Araka ny hitanao, ny foto-kevitry ny fitoniana dia mifandray akaiky amin'ny…
Tsy voafehintsika ny zavatra sasany. Miposaka ny masoandro ary milentika, miroborobo ny toekarena ary mirongatra, misandrahaka ary manjavona ny indostria, mihantitra isika. Amin'ny maha-olona antsika dia tsy misy fiantraikany firy amin'ireo zavatra ireo isika.
Ny halavanao dia tsy tena zavatra azonao fehezina, fa ny andilanao no. Tsy eo an-tananao ny halavan'ny hazakazaka marathon, fa sarotra be ny hampiofananao azy. Ny zonao amin'ny maha olom-pirenena anao dia mety ho zavatra mety azonao atao mivantana, fa ny fihetsikao manoloana azy ireo.
Ary ny momba ny toetrandro sy ny vanim-potoana… andao lazaina fa manana aretim-pihetseham-po (SAD) ianao ary miady amin'ny ririnina izay onenananao. Tsy azonao fehezina ny fiandohan'ny ririnina na ny fihenan'ny andro. Saingy afaka mifehy ny toerana onenanao ianao. Azonao atao ny misafidy ny hifindra monina any amin'ny firenena ekoatera iray hafa izay mijanona mandritra ny taona ny hafanana. Na azonao atao ny mandany ny antsasaky ny taona any amin'ny hemisphere avaratra ary ny atsimo amin'ny antsimo (vahaolana tafahoatra angamba, fa tsy azo atao).
Azonao atao ny mihevitra ny fahanterana ho lafiny voajanahary amin'ny fiainana izay tokony ekena - fa tsy voafehy izany. Etsy ankilany, azonao atao ny manapa-kevitra fa ny fahanterana dia zavatra nolazainao momba ny sakafo, fanatanjahan-tena, na fandidiana kosmetika mihitsy aza - azo fehezina (amin'ny lafiny iray).
Ka ny fifehezana, toy ny fitoniana, dia tsy mitovy amin'ny olona tsirairay. Mety tsy hitovy amin'ny fomba fijerin'ny namanao, ny mpiara-miasa aminao, na ny fianakavianao ny fijerinao.
Nahoana aho no tokony hikarakara?
Ny valiny haingana: na ny toerana misy anao amin'ny fibaikoana anatiny kokoa na ivelany dia mahatonga fahasamihafana azo tsapain-tanana amin'ny fomba itondranao ny fiainana sy ny vokatra sendra anao.
Ny valiny lava: amin'ny fahazoana ny fotoana sy ny toerana hifindranao mankany amin'ny locus fifehezana anatiny na ivelany, dia afaka mahazo tombony roa ianao. Azonao atao ny manosika sy tapa-kevitra fa tsy ho resy. Ianao dia afaka raiso ny andraikitrao amin'ireo zavatra azonao atao fitaomana izany ary ekeo ireo izay tsy azonao. Azonao atao ny maneho hatsaram-panahy rehefa tsy mahomby, rehefa mianatra lesona hiezahana tsy hanao fahadisoana mitovy amin'izany in-droa.
Ny foto-kevitra afovoany tokony hotadidina dia Mila mahay mandanjalanja SY zava-misy. Tokony hahay handanjalanja ara-tsaina ianao mba hahafahanao manatona ny fomba mety amin'ny toe-javatra tsirairay sendra anao. Ary tsy maintsy mivoaka ivelan'ny lohanao ianao ary miatrika ny zava-misy amin'ireny toe-javatra ireny koa.
Ny fiheverana ankapobeny ny toerana fanaraha-maso anatiny dia tsara, fa raha tsy misy fototra iorenan'ny zava-misy dia atahoranao ireo eritreritra fitsikerana tena miaraka amin'ny tsy fahombiazana rehetra ireo. Mety ho salama ara-tsaina ny fanekena fa misy zavatra tsy voafehinao, saingy mety ho tsy salama ihany koa ny mino fa tsy misy fitaomana na inona na inona amin'ny fiainanao.
Alohan'ny hiverenanao amin'ny fomba fijery anatiny sy ivelany dia mila manontany tena ianao hoe inona ny zava-misy. Aza mieritreritra fa ny toe-tsainao dia manitsy foana ny zavatra sasany tena tsy voafehinao, fa zavatra maro no tsy. Eritrereto izany, diniho ny safidinao, ary manapaha hevitra raha misy na tsy misy zavatra azonao atao mba hitaomana ny vokany. Avy eo na ataovy izany, na ekeo izay hitranga.
tsy liana amiko intsony ny vadiko
zavatra holazaina amin'ny olona aorian'ny fisarahana
ny fomba famelana ny fanahiana ao anaty fiarahana
vato mangatsiaka steve austin stuns donald trump
tsy mahazo aina amin'ny hoditrao
goldberg vs lesnar tafavoaka velona andiany 2016